Sirdoonka macmalka ah - miyuu horeyba u jiray? > Vielhuber David
Sirdoonka macmalka ah - miyuu horeyba u jiray?03
Qof kasta oo eegaa hareeraha farsamooyinka cusub ee labadii sano ee la soo dhaafay wuxuu heli doonaa ereyo sida teknolojiyada casriga ah ama sirdoonka farsamada (AI) marar badan iyo marar badan. Laakiin kormeer dhow, waxaan aragnaa in aaladaha badankood ay wali ka fog yihiin caqliga macmalka ah. Nidaamyada guryaha casriga ah sida kuwa ka socda Amazon ama Google ayaa si gaar ah badanaa loola xiriiriyaa AI.
Laakiin halkan, sidoo kale, waxay umuuqataa wax aan waxba tarayn. Shaqooyinka shaqsiyeed waxaa lagu fuliyaa hadal. Waxay ku saleysan tahay barnaamijyo isku dhafan, laakiin shaqo badan kuma lahan caqligan macmalka ah. Su'aashu waxay ka imaaneysaa inay runti horeba ugu jireen adeegsi gaar ah iyo, haddii ay sidaas tahay, illaa heerkee.
KI - xaggee ayay hadda joogtaa
Ugu horreyntii, waa in si cad loo sheegaa in AI ee ganacsiga gaarka loo leeyahay ay u muuqato oo keliya in la dayacay. Dhanka militariga, arrimuhu aad bay uga duwan yihiin. Iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmalka ah, koorsooyinka tababarka oo dhan ayaa halkaas lagu soo bandhigayaa si looga fogaado baahi badan. Nidaamyada hubka oo dhan waxaa lagu qalabeeyaa AI, sida nidaamyada kale ee taatikada. Qeybaha digitized leh fariimaha amarka dhijitaalka ah ayaa la qorsheeyay.
Waxa horeba looga bartay waaxda militariga illaa iyo hadda waxaa laga helay qaybo yar oo ka tirsan waaxda madaniga ah. Robotikada iyo gawaarida iswada ee halkan lagu xuso. Dhibaatada aasaasiga ah ee AI waa in qeexitaankeeda sidan oo kale la la'yahay. Xaalado badan, tani waxay u oggolaaneysaa soo-saareyaasha inay si fudud ugu shaabadeeyaan wax soo saarkooda farsamo sirdoonka farsamada. Otomaatiga ayaa horeyba loogu tirin karaa AI.
Codsiyada sida Google Translator, oo waliba adeegsada AI, waxay muujinayaan inay muddo dheer tan iyo markii ay yimaadeen nolol maalmeedkeenna. Si kastaba ha noqotee, illaa maanta natiijada runti laguma qanci karo.
Gawaarida iswada ee kaliya ayaa suurtagal ah oo leh AI
Tusaalaha ugu fiican waa dabcan wadista iskiis u madax banaan, taas oo aan suurtagal noqon lahayn la'aanteed AI. Sidoo kale waa in halkan lagu xuso in aysan jirin qeexitaan go'an iyo in tiknoolajiyada AI ee wadista ay wali tahay bilowgii hore. Laakiin sirdoonka macmalka ah laguma helo oo keliya wadista iskiis u shaqeynaya, waxaan horeyba uga heli karnaa caawiyayaal badan oo kala duwan. Hadday ku shaqeyso biriijka degdegga ah, baarkinka otomaatigga ah ama xakamaynta dalxiiska la qabsiga.
Dabcan, taasi maahan caqliga macmalka ah ee aan ka ognahay filimada ama buugaagta. Horumarku wali ma uusan gaarin heerkaas.
AI ee tafaariiqda internetka
Hababka ugu horreeya ee ganacsiga qadka tooska ah ayaa si gaar ah loo arki karaa. Si fudud u dhiska dukaan oo aad u sameysid qaar ka mid ah SEO si dhib ah uma shaqeynayaan mar dambe. Dhammaan bixiyeyaasha waaweyn ayaa durbaba isticmaalaya AI. Laakiin taasi sidoo kale waxay u baahan tahay ilo badan. Hababka ugu horreeya waxaa ka mid ah wada sheekaysiga iyo adeeggooyinka adeegga, tusaale ahaan. Tallaabooyinka ugu horreeya ayaa sidoo kale si cad loogu arki karaa waayo-aragnimada macaamiisha ee casino . Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri doona nidaamyo waxbarasho ficil ahaan silsilad kasta oo qiimo leh mustaqbalka dhow. Tani waa sida AI ay saameyn ugu yeelan doonto nidaamka qiimaha, wax iibsiga iyo wax soo saarka. Mustaqbalka dhow, aalado ayaa nagala talin kara ganacsiga. Way adag tahay in la qiyaaso. Laakiin 30 sano ka hor ma qiyaasi karno Alexa sidoo kale.
Kaliya maaha tafaariiqda internetka, laakiin sidoo kale dukaamada leben-iyo-hoobiye, AI waxay mustaqbalka hubin doontaa in shaqada caadiga ah ay otomatig noqon karto oo ay sidoo kale sidoo kale hesho xogta ku saabsan horumarka mustaqbalka. AI waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosheena dhammaan meelaha mustaqbalka.